I-Deutsche Bank i-mass-fired sign sign first? : UMartin Vrijland
Mhlawumbi ufumene; ukutshabalalisa ubunzima kwiDeutsche Bank (DB). Ukungabhengezwanga, amawaka abasebenzi bafumene ileta yabo yokusula emsebenzini ngoMvulo odlulileyo kwaye bakwazi ukukwenza ngaphandle kwenceba masinyane ashiye isakhiwo. Amagumbi amakhulu kakhulu e-London ahlala eLondon naseWashington DC, kodwa amawaka kwezinye ihlabathi alahlekile. Iphelele, i-18.000 ivunyelwe ukubeka umsebenzi wabo kwaye kunyaka ozayo ukunciphisa ngokupheleleyo kuya kwanda kubaqeshwa be-74.000. Leyo yinqanaba elikhulu lebhola lebhola lebhola kwaye umphumo lukhulu kakhulu, kuba eLondon yodwa Abasebenzi be3000 banokuthi bangakwazi ukuhlawula imali yabo okanye irente ngenxa yokufumana umsebenzi omtsha.
Kuyamangalisa ukuba ibhanki enjalo iqalisa ngokukhawuleza ukusika ngexesha apho uqoqosho lungahambi kakuhle kunye noqoqosho nakanjani. Njengokuba ziphuma kumakhulu amabhiliyoni kwibhanki elinjalo, iimbalwa ezimbalwa zeemali kwiindleko zabasebenzi akuzona nje ukuhla kwezilwandle. Njengoko ndiyakhathazeka, sinokubona apha imiqondiso yeengxaki eziye zacwangciswa ixesha elide, eziza kunikwa i-push push. Nangona singatsho ukuba amadoda angamawaka ambalwa e-United Kingdom malunga ne-65 yesigidi sabantu ayenayo impembelelo enkulu, asifanele sithintele umphumo we-snowball.
Uqoqosho lwaseBrithani selufikile. I-Guardian ibike kwi-3 uJulayi kulo nyaka. oku kulandelayo:
Ngowokuqala kwiminyaka eyisixhenxe, uqoqosho lwe-UK luye lwafumana ulwaphulo ngexesha lekota yokuqala (iingxelo ezicwangcisiweyo zengxelo) ngenxa yokuba usongelo lwe-no-deal Brexit lugxotha ishishini.
Ukukhula kwinqanaba leenkonzo zaseburhulumenteni ze-UK liphantse ligqitywe ngoJuni. Oku kufakazela ukujonga okubonakalayo kwenyanga apho i-shishini kunye nezokwakhiwa zithela ngaphesheya.
Amanqaku abonisa ukuba uqoqosho lwe-UK luvunyelwene nge-0,1% kwiinyanga ezintathu ukuya ku-Juni, kusho i-IHS Markit kunye neChartered Institute of Procurement and Supply (Cips), ehlanganisa uphando lweenyanga.
I-alamu kwimpilo yezoqoqosho iyakhala, ngoku ukuba iBrithani kulindeleke ukuba ihambe kwi-EU ngaphambi kwe-31 Oktobha. Ukuba le nkqubo ayiguquli ngokukhawuleza kwikota yesithathu, ilizwe liya kuba sele lihamba ngokwemali phambi kwe-Brexit.
Amanani ase-US ayenyantya, njengoko sibona kwiwebhusayithi alt-market.com (cofa ukuze ufunde):
Izalathisi ezibalulekileyo njengeemakethe zentlupheko zichaphazeleka ngokubanzi ngokuthengisa kwi-7,8% kunye nokuwa kwamanani ngama-8,1%.
Ukuthengiswa kweenqwelo zezimoto kusebenza kwizinga eliphantsi kuneminyaka emine, ngelixa inzala kwimali mboleko yemoto iyanda.
Sibona amanqanaba omlando wabatyala ababoleki kunye namatyala enkampani. Sibona ukuvalwa kwezinto ezinkulu (ngaphezu kwe-7100 ukuvalwa ngokushunyayelwayo kude kube lo nyaka), ukuyeka ukuphazamisa ukuthunyelwa kwempahla kunye nempahla, indawo ephantsi kunazo zonke kwi-PMI yokuvelisa umhlaba jikelele, i-PMI ebuthakathaka ukususela kwi-industry ye-US ukususela ngo-2009 kunye nokuchithwa kwishati yebhanki karhulumente, njl njl.
Ngaloo nto siye safikelela kwinqanaba lokuba ndixelelwe apha kwisayithi ixesha elide: i-crisis-planning, apho i-blame yokulahleka iya kufakwa kwiinkcenkcesho zenkcaso elawulwayo: ukunyuka kwamanqanaba okuzenzela okwenziwe ngokuzenzekelayo, lizwe lokuqala 'sengqondo. Le nkqubo iye yacetywa ngamabomu ixesha elide, kunye neendlambo zeTrump kunye neBrexit eziza kumandla e-US nakwi-UK ngokulandelanayo, kwaye ngoko uqoqosho luya kuphazamiseka, ukwenzela ukuba ubuzwe, ukukhuselwa kunye kunye (nokuchasana okulawulwayo) kungabhekiswa ngqo ) 'iingcamango zobuqhetseba' kunye nabo bonke abanye abantu baya kukhangela eli qela njengamalungu e-NSB e-40 / '45 iminyaka. Le ndlela ivuleleke ngokupheleleyo kwi-oda elitsha kwi-chaos ekulindeleke (kunye nexesha elide). Umdlalo waseRoma wamandulo we-Ordo ab Chao (ukudala umyalelo ngaphandle kweengxabano) esizibonayo phambi kwamehlo ethu.
Ukuba ufuna ukwakha urhulumente wehlabathi, kufuneka uqaphele ukugxeka kuluntu. Yintoni enokuba ngcono kunokufumana elo qela elibalulekileyo ukuze lifumane amandla kwaye likhule ekuxhaseni, ukubeka isandi esicacileyo ngokucacileyo ngokusemandleni kwi-retina yabantu bonke, ize igalele ihlabathi kwientlekele zezoqoqosho kwaye ngokugqibeleleyo iphele ukuba ibalwe nelo qela elibalulekileyo? Lo ngumdlalo wokuchaswa olawulwayo.
Yisihlandlo sokuba ubone ukuba ungowona uqobo; ukuba ihlabathi liqhutywa ngokucacileyo kunye nokuba iqela elincinane phezulu liqhutyelwa ukuthumela le script isiqulatho esithile. Inyaniso elula endiyifunayo kwaye ndiqikelele le nkqubo apha kwisayithi ixesha elide ingabonakalisa ukuba akukho ntsomi eyaziwayo apha. Yonke intuthuko enokuyilandela phantse yonke imihla inikezela ubungqina bolu. Umbuzo wodwa wukuthi kuthatha ixesha elingakanani ukuvusa ngaphambi kokubona lonke.
Unokufumana yonke into malunga nale nyaniso kunye ne script eli nqaku kunye namanqaku axhunyiwe. Thatha ingxaki uze uyifunde kakuhle.
Uludwe lwekhonkco lovimba: zerohedge.com, theguardian.com, guardian.com
Brexit kunye neengxabano ezicwangcisiweyo zeYurophu
U-Nigel Farage utyundela, i-Brexit yayiyi-psyop yokuchithwa kwamandla kunye neengxabano zemali
I-Brexit kunye neengxaki zikaRhulumente yindlela efanelekileyo yokufikelela kwamandla angaphezulu kwe-EU
Ukuphela kokugqibela kwe Brexit emehlweni emva kokuba iBritish House of Commons ingavumi
tags: ngxaki, DB, Deutsche ibhanki, eziziimbalasane, bunzima, zixothwe, kwezomnotho
10 Julayi 2019 kwi-12: 24
Okwangoku, ukuphonsa i-13 billion kwi-teknoloji entsha ... ukuze imali ikhona
11 Julayi 2019 kwi-11: 09
Kwinqaku elingenhla ndithetha ngamashumi amawaka eendleko zemvuzo. Ngokuqinisekileyo, ukuba utshaba abantu abangu-18k kwaye uqikelele ukuba zonke iindleko zilinganiselwa kwiitani enye ngonyaka, yiyo i-1.8 yezigidi ngonyaka. Yaye ukuba uthe wagcina abantu abaninzi, kuya kuhla kakuhle. Nangona kunjalo, unokuzibuza ukuba zeziphi abantu abazenzayo kulo lonke ixesha. Kubonakala ukuba zibuhlungu kakhulu ukuba ayikuchaphazeli kakubi imisebenzi yasebhankini yemihla ngemihla, mhlawumbi umntu kufuneka alinde ukuba akwazi ukuguqula ngokukhawuleza imisebenzi kwimisebenzi ye-automated, kodwa akukho ... umntu unokuqala ukususela ngosuku olunye ukuya kwesinye kubonakala kungekho mphumo oyingozi. Ngaba abo bantu baye bathabatha impumlo zabo zonke ixesha?
10 Julayi 2019 kwi-13: 30
Ngokuqinisekileyo, kodwa ngokukhawuleza yonke into iyawa, enkulu 'ithuba' ekugqibeleni amakhoboka aya kudlala ngokuchasene namakhwenkwe esi script. Amakhoboka ahlala eselungileyo kwaye elinde yonke into.
10 Julayi 2019 kwi-14: 03
Ukuba ufunde inqaku lam elidlulileyo malunga nomntu onobuhlungu, akufanele uhlaziye elo thuba
10 Julayi 2019 kwi-15: 04
Eli thuba li-0%.
10 Julayi 2019 kwi-16: 38
Siye saxela iminyaka edlulileyo ukuba kuya kwenzeka ukuba iqale ngeDB, icebo langaphambili elivela kubalingisi abaphambili. Akukho nto elingaphantsi kwelanga, libukele ukusuka kumgama njengoko indlu yamakhadi izothumela. Uqoqosho olwakhiwe kumatyala (kubandakanya ukuthenga / ukuthenga / ukukhwela) luya kulahlwa.
« Ngaba baninzi abantu abasondelene nawe (imizimba engaphiliyo)?
I-'go 'yinkqubo ye-AI ezalisa i-autopilot ye-avatar-bio-robot »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.825.890